तपाइकाे माेबालका हानिकारक एप्सहरु के के हुन थाहा छ ? – खबर खुराक
Home > सूचना प्रबिधि > तपाइकाे माेबालका हानिकारक एप्सहरु के के हुन थाहा छ ?
तपाइकाे माेबालका हानिकारक एप्सहरु के के हुन थाहा छ ?
१४ पुष २०७६, सोमबार १७:०४
स्मार्टफोनका लागि विभिन्न किसिमका एप्स स्टोरमा उपलब्ध छन् । अझ तपाइँ एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता हुनु हुन्छ भने फरक फरक किसिमका एप्स डाउनलोड गर्ने अवसर रहन्छन् । तर, यदि तपाइँ एन्ड्रोइड स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाइँलाई यी ४ किसिमका एप्स आफ्नो स्मार्टफोनबाट हटाउन सुझाव दिन्छौ ।किनकी यी एप्सले तपाइको स्मार्ट फोनको पर्फर्मेन्स, कार्य शैली, डाटा र प्राइभेसीलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्छन् । स्पिड बुस्ट– स्पिड बुस्ट गर्ने दाबी गर्ने एप्सहरू प्ले स्टोरमा दर्जनौंको संख्यामा भेटिन्छन् । स्मार्टफोन स्लो हुनेबित्तिकै तपाइँहरूमध्ये कैयौंले गुगल प्ले स्टोरमा गएर यस्ता एप्स डाउनलोड गर्नु हुन्छ जसले मेमोरी वा र्‍यामलाई बुस्ट गर्ने दाबी गर्छन् ।
तर यिनीहरूले साच्चिकै केही गर्दैनन् । स्पिड बुस्ट गर्ने दाबी गर्ने एप्स ब्याक ग्राउन्डमा चलिरहेका हुन्छन् र यसले तपाइको स्मार्ट फोनमा विभिन्न अनुमति लिएको हुन्छ । यसले तपाइँको डाटा चोरी गर्ने वा तपाइँलाई विज्ञापन देखाउने काम गर्छ । एन्ड्रोइडमा पहिलेदेखि नै यस्ता फिचर हुन्छन् जसले फोनको मेमोरीलाई बुस्ट गर्छ । मेमोरी सेभिङको दाबी गर्ने थर्ड पार्टी एप्सले सामान्य स्तरमा तपाइँको स्मार्टफोनमा कुनै सुधार गर्दैनन् । ब्याट्री सेभ गर्ने एप्स– गुगल प्ले स्टोरमा ब्याट्री डाक्टर, ब्याट्री सेभर, ब्याट्री सलुसन लगायत नाममा सयौं एप्स भेटिन्छन् । यी एप्सले तपाइँको स्मार्ट फोनको ब्याट्री बचाउने दाबी गर्छन् । कतिले त यस्तो एप्स इन्स्टल गरे पछि ब्याट्री ब्याक अप डबल हुने बताउँ छन् तर यस्तो केही पनि हुँदैन । लिथियमको ब्याट्री हुन्छ र यसले आफ्नो किसिमले काम गर्छ ।
सबै स्मार्टफोनमा पावर सेभिङ मोड राखिएको हुन्छ र तपाइँले यसलाई प्रयोग गरेर ब्याट्री सेभ गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसैले यी एप्सहरूको केही काम छैन । ब्लाटवेयर– कैयौं एन्ड्रोइड स्मार्टफोन कम्पनीले पहिले नै यसलाई इन्स्टल एप्सको रूपमा उपलब्ध गराएका हुन्छन् । यी एप्सलाई तपाइँले ब्लाटवेयर पनि भन्न सक्नु हुन्छ । यी अनावश्यक एप्सले तपाइको स्मार्ट फोनको ऊर्जा र कार्य क्षमतालाई असर पारिरहेका हुन्छन् । यी अनावश्यक एप्स तपाइको कामको लागि उपयुक्त छैनन् भने यसलाई हटाउनुस् ।
यदि यी अनइस्टल हुँदैनन् भने तपाइँले यसलाई डिसेबल गर्न सक्नु हुन्छ । यस्ता एप्सले अधिक मेमोरी खपत गर्ने गर्छन् । क्लिनिङ एप्स– क्लिन मास्टर, क्लिनर, स्मार्ट फोन क्लिन नाममा कैयौं एप्स उपलब्ध छन् । यी जस्तै अन्य क्लिनिङ एप्स प्रयोग गर्नु जोखिम युक्त हुन्छन् । क्लिन मास्टर एपमाथि नै कैयौं आरोप लागिसकेका छन् । स्मार्टफोन क्लिन गर्ने नाममा यी एप्सले स्मार्टफोनको मेमोरी र इन्टरनेट डाटा खपत गरिरहेका हुन्छन् । यसका साथै तपाइको डाटा समेत चोरी गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रकाशित मिति: १४ पुष २०७६, सोमबार १७:०४
Previous: ट्याक्टरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
Next: सत्तापक्षकै सांसदको समर्थनमा प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरीयाे